မိုက်ခဲစိန် – အေးငြိမ်း၏ ‘စိတ်ပျက်စရာ မြန်မာစာရေးပုံ၊ ဘာသာပြန်ပုံနှင့် ကွန်ပြူတာ စာရိုက်ပုံများ’ ပို့စ် ပျောက်ဆုံးမှု ရှာပုံတော် | MoeMaKa Burmese News & Media
မိုက်ခဲစိန်လည်း စာရေးနေရင်းကနေ ရှာပုံတော်ဖွင့်ရပြန်ပါတယ်။ သာဂိက ဥာဏ်တိမ်လှတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်လူပြိန်းပရိသတ်ကြီးကို အဆင့်မြှင့်တင်ရေး လုပ်ကြဖို့ စာရေးနေချိန်မှာ အေးငြိမ်း(လေးမျက်နှာ)ကလည်း ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်ကနေ ပို့စ်တခု တင်ပါတယ်။ မြန်မာစာရေးပုံ ဘာသာပြန်ပုံနှင့် စာရိုက်ပုံများ စိတ်ပျက်စရာအကြောင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးမခကလည်း ပြန်လည် ကူးယူ ဖော်ပြထားပါတယ်။ စာရေးသူတွေက ဘာလုပ်လုပ် တာဝန်ယူမှုရှိရန်ရေးထားတာပါ။ ဖတ်နေတုန်း ရှိသေးတယ် အဲသည်ပို့စ်က အွန်လိုင်းကနေ ပျောက်ချင်းမလှ ပျောက်သွားပါတယ်။ မိုးမခမှာလည်း မရှိတော့၊ အေးငြိမ်းစာမျက်နှာမှာလည်း မတွေ့ရတော့ပါ။ ဒါဟာ ပို့စ်တခု ပျောက်ဆုံးမှုပါ။ ဒါနဲ့ မိုက်ခဲစိန်လည်း ရှာပုံတော် ဖွင့်ရပါတယ်။ ခန့်မှန်းကြည့်ရတာကတော့ တခုခုသောအကြောင်းကြောင့် ပို့စ်ကို တစုံတဦးက ဖယ်ရှားလိုက်ပုံရပါတယ်။ ခြေရာလည်း ပျောက် ရေလည်း နောက်ပေါ့ခင်ဗျာ။
မြန်မာပြည်မှာ စာပေစိစစ်ရေးမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ စာပေဆင်ဆာဖြတ်သူများဟာ ကိုယ်ထူကိုယ်ထများ ဖွဲ့ထားပြီးတော့ သူတို့မနှစ်သက် မလိုလားတာတွေကို မည်သို့လုပ်လိုက်သည်မသိ ဖျက်ပစ်နေကြသလား။ စာရေးသူတွေကို ဖိအားတွေ ပေးနေကြသလား။ မခံနိုင်အောင် ချောင်ပိတ်ထားကြသလား မသိပါဘူး။ မကျေနပ်ကြရင်လည်း ကွန်မင့်တွေနဲ့ troll (နောက်ယောက်ခံလိုက်) လုပ်ပြီး နှောက်ယှက်နေကြသလား မသိပါဘူး။ မသိပါဘူးလို့ရေးတဲ့အတွက် သိတဲ့အကြောင်းမဟုတ်လို့ သည် ရှာပုံတော်ပို့စ်ကိုတော့ လာဖျက်လို့ ရမယ် မထင်ပါ။ သိတဲ့အကြောင်းရေးတာမှ မဟုတ်တာကိုး။ မသိတဲ့အကြောင်းရေးတာပါ။
ဆရာအေးငြိမ်းရေးထားတာကို မှတ်မိသလောက် ပြန်လည် မိမိဘာသာ ပြန်ဖော်ပြရသည် ရှိသော် (ဒါဆိုရင် ကိုအေးငြိမ်းနဲ့မဆိုင်၊ မိမိနဲ့သာ ဆိုင်ပါသည်)။
မြန်မာစာ အရေးအသား၊ ဘာသာပြန်ခြင်း၊ ကွန်ပြူတာစာရိုက်ခြင်းများနှင့်ပတ်သက်၍
ကျွန်တော် တော်တော်များများ ရေးခဲ့ ဖူးပါပြီ။ အခုလည်း စိတ်ပျက်စရာများ
တပုံတခေါင်းကြီး တွေ့ရပြန်သောကြောင့် ရေးလိုက်ရပြန်ပါ၏။
ဘာသာပြန်သူသော်လည်းကောင်း၊ ကွန်ပြူတာစာစီသူသော်လည်းကောင်း (မည်သူဖြစ်စေ)
မိမိတို့လုပ်ထားသည့် အလုပ်ကို မိမိတို့တာဝန်ယူသင့်၏။
WSH Myanmar က
safety နှင့်ပတ်သက်၍ ဂျာနယ်ထုတ်တော့ စာမူအားလုံးကို ကျွန်တော်ပင် ဖတ်ရှု၊
တည်းဖြတ်ပေးရ၏။ ဖတ်ရှုတည်းဖြတ်သည်ဆိုခြင်းကို လွယ်လွယ်လေး
မထင်လိုက်ပါနှင့်ခင်ဗျား။ စာတစ်ပုဒ် ပြင်ပြီးသည့်အခါတိုင်း ကျွန်တော့်မှာ
ဆံပင် (၁၄) ချောင်းနှင့်တစ်ပိုင်းတိတိ ဖြူ၏။
စာရေးသူကိုယ်တိုင် ကွန်ပြူတာစာစီ၏။ အချို့စာရေးသူများမှာ
မြန်မာစာမရိုက်တတ်သောကြောင့် လက် ရေးနှင့်ရေးကာ ဆိုင်ကိုအပ်၏။ အချို့ကျတော့
အောင်မယ် စမတ်ဖုံးနှင့်ရိုက်သည် ဆို၏။ ချီးကျူးဖွယ်ရာပါတည်း။ ထို့ကြောင့်
စာရေးနေပါသည်ဆိုသော ဆရာကြီးများလည်းပါ၏။ ဖေ့စ်ဘုတ်တွင် မပြတ်တင်နေသော
ပို့စ်ဂုရု ကြီးများလည်းပါ၏။ တစ်ခါမှ မရေးဖူးသူများလည်းပါ၏။ ကိုယ့်ဘာသာ
လက်တည့်စမ်းနေသူများလည်း ပါ၏။ မည်သို့ပင် ကွဲစေကာမူ မှားပုံနှင့်
ရေးပုံများမှာတော့ လက်ဖျားခါလောက်အောင် လာတူနေကြလေသည်။
ဒီအတိုင်းမှားကြစို့ရဲ့ဟု တိုင် ပင်ထားသလားတောင် အောက်မေ့ရ၏။
မြန်မာစာ/စကားက လုံးကောက်အဓိပ္ပာယ်ထွက်၏။ အဖြတ်အတောက်မှားသည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ပါ မှားသည်။
ထိုအခါ အဖြတ် အတောက်မှားမှာ ကြောက်ကြကုန်သည့် ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေအပေါင်းမှာ
စာကို လုံးဝအဖြတ်အတောက်မရှိဘဲ အစမှ အဆုံး တိုင် တစ်ဆက်တည်း
ရေးကြလေကုန်သတည်း။ ကျွန်ုပ်မှာ ၎င်းတို့စာကို လိုက်ဖြတ်နေရသည်နှင့်ပင်
အချိန်များ အတော် ကုန်လေ၏။ စိတ်များလည်း အတော့်ကိုပျက်လေ၏။
ပုဒ်ထီးနှင့် ပုဒ်မကို မည်သည့်နေရာတွင် သုံးရမည်မသိခြင်းကား အတော့်ကို
ဆိုးရွားလှပါပေ၏။ စာလုံးပေါင်း မှား တာကိုတော့ စာမဖွဲ့တော့ပါ။ သို့တိုင်
အသက် ၅၀ လောက်ဆရာကြီးများက ခေတ်ပေါ်ကာလသား/သမီးကလေးများလို လုပ်တက်တယ်၊
စားတက်တယ်၊ လာတက်တယ်ဟု ရေးလေသည့်အခါ ကျွန်ုပ်မှာ စိတ်ပျက်သည့်ဟိုဘက်
နှစ်ဘူတာလောက် လွန်ကာ ရွံသည့်အဆင့်သို့ ရောက်လေတော့၏။
ဟုတ်ပါတယ်။ မိုက်ခဲစိန်လည်း စာရေးတာ စာရိုက်တာ အတော်ဆိုးပါတယ်။ မိုးမခက အယ်ဒီတာကိုခင်လွန်းဆိုရင် မိုက်ခဲစိန်စာမူကို အတော်ပြင်ဆင်ယူရလို့ စိတ်ကုန်တယ်ဟု မှတ်ချက်ပေးကြောင်း ကြားရပါတယ်။ သည်လို ဝေဖန်တာကို မိုက်ခဲစိန်တို့ကတော့ ကျေနပ်စွာ ခံယူလေ့ရှိပါတယ်။ ဟုတ်နေတာကိုး။ ဟုတ်နေတာ ပြောရကောင်းလားဆိုပြီး သူ့ကို ပြန်ပြီး ကလန့်မတိုက်ခဲ့ပါ။ ပြင်နိုင်သလောက် ပြင်ပြီး စာရေးလို့ အတော်ဟုတ်လာပြီလို့ အပြောခံရပါတယ်ခင်ဗျ။
ကိုအေးငြိမ်းက ဒါနဲ့တင်မရပ်ပါ။ သူစာစောင်လုပ်ခဲ့စဉ်က ဘာသာပြန်ချက်တွေ ပေါ့ဆမှုကိုလည်း ဝေဖန်ပါသေးတယ်။ ကျနော်မှတ်မိသလောက် သူရေးထားတာ ပြန်ပြောရရင် သည်လိုပါ ….
ခုနှစ်များဆီက ECC project တွင် ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ကြ၏။ Safety
သင်တန်းဆရာမှာ ဆရာကြီး ဦးနွယ်ဝင်း ဖြစ်၏။ Shell project ဆိုတော့
ပိုက်ဆံချမ်းသာ၏။ Safety အတွက် ဒေါ်လာ သန်းနှင့်ချီသုံး၏။
အလုပ်သမားများအတွက် Safety handbook တစ်ခုကို Safety ဌာနက စီစဉ်ကာ
ဘာသာမျိုးစုံဖြင့် ထုတ်ဝေ၏။ မြန်မာအလုပ်သမားများလည်း ထောင် ဂဏန်း
တော်တော်များများ ရှိရာ မြန်မာဘာသာဖြင့်လည်း ရိုက်နှိပ်၏။
ဘာသာပြန်ချက်များမှာကား လက်ဖျားခါလောက်ပါပေ၏။ အဘယ်ကြောင့် လက်ဖျားခါရသနည်း
ဟူ မူ ကျွန်တော် ကြံကြံဖန်ဖန်စဉ်းစားကာ ဘာသာပြန်လျှင်ပင် ၎င်းလောက်
သောက်တလွဲစကားလုံးများကို စဉ်းစားမိမည် မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်၏။ စာမျက်နှာ ၅၀
ခန့်ရှိမည့် လက်တစ်ဝါးစာ စာအုပ်ကလေးတွင် မှန်ကန်သည့်စကားလုံးဟူ၍
တစ်လုံးတစ်လေမှ မပါပါ။ ထိုစာအုပ်ကို ဘာသာပြန်ရန် စင်ကာပူဒေါ်လာ
တစ်သောင်းကျော် ကုန်ကျသည်ဟု သိရသည့်အခါ ကျွန်ုပ်မှာ အံ့သြလွန်း၍
နောက်တစ်ခုမှာ စင်ကာပူမှ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားတို့
မဖြစ်မနေတက်ရသည့် ယခင်အခေါ် CSOC, ယခုအခေါ် ACS (Appplied Workplace Safety
and Health in Construction Sites) သင်တန်းမှ မေးခွန်းများကို
ဘာသာပြန်ထားချက် ဖြစ်၏။ မည်ကဲ့သို့သော ပညာရှိမင်းက
ဘာသာပြန်ထားတော်မူသည်မသိ။ (မူရင်းကိုတော့ ဓာတ်ပုံရိုက် တင်ပေးလို့မရပါ။
တော်ကြာ အလကားနေရင်း ပြဿနာအရှာခံနေရဦးမည်။)
သူတို့ဘာသာပြန်ထားပုံကလေးကိုတော့ မိတ်ဆွေတို့ မြည်းရ အောင် နည်းနည်းလောက်
ပြပါရစေဦး။ အလုပ်သမားတွေ မပြောနှင့်။ ကျွန်ုပ်တောင် သူတို့ဟာဖတ်ပြီး
ဘယ်လို နားလည်ရ မှန်းမသိ။
ACS မေးခွန်း နမူနာများ
လုပ်ငန်းဥပဒေအရ အလုပ်ရှင်သည် အောက်ပါတို့မှ မည်သည့်အချက်ကို ဆောင်ရွက်နိုင်သနည်း
အလုပ်လုပ်ခွင့်ဥပဒေများမှမည်သည့်အချက်ကိုမဆို ချိုးဖောက်လျှင် အောက်ပါဖော်ပြချက်များ မှမည်သည့်အချက်သည် မသက်ဆိုင်သနည်း
A. အလုပ်သမားသည် ထောင် သို့မဟုတ် ဒဏ်ငွေထိလျှင်
B. အလုပ်သမားသည် ၏ အလုပ်လုပ်ခွင့် ပယ်ဖျက်ခံရလျှင်
C. အလုပ်သမားသည် အချန်ပို အလုပ်လုပ်ရန်မေးလျှင်
D. အလုပ်သမားသည် နောင်တွင်စင်င်္ကာပူတွင် အလုပ်လုပ်ရန် ပိတ်ပင်ခံရလျှင်
နမူနာမျှ ဖြစ်ပါ၏။ ခြုံ၍ပြောရပါမူ ဤမေးခွန်း၌ တော်တည့်မှန်ကန်သည့်
အသုံးအနှုန်းနှင့် ရေးသားထားသည့် စာတစ်ကြောင်းတလေမှ မပါပါ။
မိတ်ဆွေတို့သိအောင် ပြောပြရလျှင် ထိုစာများကို ဘာသာပြန်ခမှာ
တစ်မျက်နှာလျှင် မြန်မာ ပြည်မှ အလုပ်သမားတစ်ဦး၏ ဆယ်ရက်စာမျှ မကပါ။
ကိုယ့်ပိုက်ဆံမဟုတ်သည့်တိုင် သည်ကဲ့သို့သော သောက်တလွဲ ဘာ သာပြန်များကို
သည်မျှ ဈေးကြီးပေးရခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်မှာ အလွန်နှမြောလှဘိ၏။
မိုက်ခဲစိန်လည်း အဆိုပါ ရည်ညွှန်းစာများကို ဖတ်ပြီး နားမလည်ပါ။ နားလည်မိတာကတော့ လက်သင့်ရာ ခိုင်းကြ ပရိုဂျက်တွေ ချပေးကြတော့ ထွက်လာတဲ့စာတွေဟာ နတ်လူသာဓု ခေါ်လို့ရတဲ့စာတွေ ဖြစ်မလာဘဲ မျက်ရည်တောက်တောက်ကျလောက်အောင် ခက်ခဲလှတဲ့ ဆယ်တန်းမေးခွန်းတွေလို ကျောင်းသားတွေ အခက်တွေ့ရတာနဲ့ အလားသဏ္ဍန်တူတယ်ဆိုတာကို နားလည်မိပါတယ်။ မှားတာကို မှားတယ်ပြောရင် ပြင်ရုံသာ ရှိတာပေါ့ခင်ဗျာ။ ပြင်ဖို့ပြောတဲ့သူကို လက်စဖျောက်ပစ်ဖို့တော့ မလိုဘူး ထင်မိပါတယ်။
မိုက်ခဲစိန်လည်း လက်ရှိဆယ်တန်းမေးခွန်းကမေးထားသလို balance diet ကို စာစီကုံးပါဆိုရင် ဘယ်လိုက စပြီး ကုံးရမှန်း သိမှာ မဟုတ်ပါ။ balance diet ဆိုတာတောင် မသိတဲ့ ဆယ်တန်းသားမပြောနဲ့ ကျနော့်လို ငါးပိ ငံပြာရည်စားသူ ဆယ်တန်း ဆယ်ခါပြန်အောင်ထားသူလည်း သိဖို့ မလွယ်ပါ။
ကိုအေးငြိမ်းက စိတ်ပျက်စရာကို ရေးသားရာမှာ ဒါနဲ့တင် မရပ်ပါ။ ဆက်ရေးပြန်ပါတယ်။ မှတ်မိသလောက် ပြောရရင် ဒီလိုပါ။
စင်ကာပူမှ အိမ်အကူလုပ်သားများ (FDW – Foreign Domestic Worker) (မြန်မာလို
ခပ်ရိုင်းရိုင်း အားမနာတမ်း ပြောရရင် အိမ်ဖော်ပေါ့ဗျာ) ကို
အိမ်တွင်းအန္တရာယ်ကင်းရေး သင်တန်းပေးရာတွင် အင်္ဂလိပ်လို ပေးသည်။
မြန်မာလိုတောင် ဖြောင့်အောင် မရေးတတ်သော ထိုမိန်းကလေးများမှာ ဘယ့်နှာလုပ်
အီးလိုတတ်ပါမည်နည်း။ တကယ် နားလည်၊ မလည်ကို သူတို့မှ သိမည်။
ယခုတော့ သူတို့ကို မြန်မာလိုသင်ဘို့လုပ်နေသည်။ ကိုဟန်မျိုးနောင်ဆက်သွယ်ပေးမှုဖြင့် ကျွန်ုပ်နှင့် ကိုနွယ်ဝင်းလည်း ဝင်ပါ လေ၏။
ဆလိုက်များကို မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုထားသည်။ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ခင်ဗျာ။
ဘာသာပြန်အမှား၊ ဝေါဟာရ အများမှား တပုံတပင်ကြီး ပါလာသည်။ မျက်စိရှေ့မှာ
အမှားကြီးမြင်နေရတော့ ကျွန်တော်ကလည်း မနေနိုင်။ ဆလိုက်တစ် ခုချင်းအလိုက်
ဘယ်ဟာက ဘာမှားနေသည်ဆိုတာကို (ကျွန်တော်တို့ကို လာစစ်သည့်) MOM အရာရှိထံ
ပို့လိုက်သည်။ သို့သော် ဘာမှ ဖြစ်မလာပါ။
သည်လိုအမှားများကို ထောက်ပြတာ ဒါပထမဆုံးမဟုတ်။ ဟိုးယခင် (၂၀၁၅
ခုနှစ်လောက်က) CSOC မေးခွန်း အမှားများကိုလည်း ဇယားဆွဲ၊ မှင်နီတားကာ ဒါတွေက
မှားသည်၊ အမှန်က ဘယ်လိုဖြစ်ရမည် ဆိုသည်ကို ပရင့်ထုတ်ကာ MOM မှ
သင်တန်းဆရာချုပ်မှူးကြီးထံ ပေးဖူးပါ၏။ သြော – ဟုတ်လားဆိုကာ ယူသွားသည်။ ဘာမှ
ယခုလည်း သည်အမှားများကို ၂၀၁၈၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့က ပို့လိုက်သည်။ ယခု အသစ်ပို့လာသည့် ဆလိုက်များတွင် ဘာတစ်ခုမှ ပြင်ထားတာ မတွေ့ရ။
ထိုအိမ်အကူလုပ်သား safety သင်တန်းအတွက် MOM ရှေ့မှောက်တွင်
တတိယအကြိမ်မြောက် လက်တွေ့ သွားသင်ပြရ၏။ ကျွန်တော်ကလည်း အမှတ်မရှိ။
ထိုအမှားများကို ပရင့်ထုတ်ကာ ထပ်ပေးပြန်၏။ ဟေ – အဲဒါ ပရော်ဖက် ရှင်နယ်
ပြင်ထားတာပဲကွဟု MOM အရာရှိကဆို၏။ ဟတ်လား – ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆိုရင်တော့
လောက်ဇီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် (lousy professional) ဖြစ်မှာပဲ ဟု ကျွန်ုပ်လည်း
တုတ်လိုက်၏။ အေး – ငါတို့ ပြန် ရီဗျူးလုပ်လိုက်မယ်ဆို၏။ ကျွန်ုပ်ကတော့
မင်းအောင့်သီချင်းလို ‘ဂုဏ်မြင့်သူ လှည့်စားရက်တယ်’ ဟုသာ ပြောလိုက်ချင်ပါ၏။
မိုက်ခဲစိန်သဘောပေါက်တာကတော့ မှားသူက မှားလို့၊ မှားတာကို ထောက်ပြသူက ထောက်ပြရင် ပြင်ဆင်ရုံသာ ရှိတာပေါ့ခင်ဗျာ။ အမေစုကလည်း ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီလို့ ပြောထားတာပဲ။ ပြောင်းလဲချိန်ဆိုတာက အမှားကနေ အမှန်ကို ပြောင်းလဲချိန်လို့ သဘောပေါက်မိပါတယ်။ အမှားကို ထောက်ပြလာရင် အဲသည်ပြောလာသူကို ပြောင်းလဲပစ်ရမယ်၊ ဖယ်ရှားပစ်ရမယ်လို့ ပြောထားတာမှ မဟုတ်တာပဲ။ မပြောင်းလဲဘဲ ဆက်ပြီး ခေါင်းမာမာနဲ့ ဆက်မှားနေ ဆက်လုပ်နေတာကတော့ တဆိတ်တရားလွန်တယ် မထင်ဘူးလားခင်ဗျား။
အောက်ကရေးထားတာကို ဖတ်မိရင် ပိုပြီး ထင်ရှားလာပါတယ်။ ပြင်ခိုင်းတယ်ဆိုတာ အမှန်ကို ပြင်ခိုင်းတာ မဟုတ်ပါတဲ့။ စာတွေ ကြည့်လို့ လှအောင် အပြင်အဆင်ကလေးသာ ပြင်ခိုင်းနေကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ ရွှေပြည်ကြီးမှာ လူတချို့ထင်နေတာက မှားတောတွေကို ကြည့်ကောင်းအောင် အပြင်အဆင်လေး ဟိုရွှေ့ သည်ရွေှ့ ဟိုစီ ဒီစီ လုပ်လိုက်ရင်ပဲ မှန်သွားမယ်များ ထင်နေကြသလား မသိပါဘူးလို့ တွေးမိပါတယ်။ မှတ်မိသမျှလေး ချရေးထားတာ ဖတ်ကြည့်ပါ။
လာပြန်ပါချေ၏။ စင်ကာပူမှ သင်တန်းများကို နမူနာယူကာ (ယဉ်ကျေးအောင်ပြောတော့
နမူနာယူတယ်၊ ပညာ ရှိဆန်ဆန်ပြောရင် ရည်ညွှန်းတယ်၊ အရပ်စကားဆို ခိုးချတယ်၊
ဘယ်လိုပြောပြော အဓိပ္ပါယ် အတူတူပါဘဲ ခင်ညာ) ရန်ကုန်မှ ဘတ်စ်ကားဆရာများကို
သင်တန်းပေးဘို့ဆိုကာ သည်က သင်တန်းမှတ်စုများကို မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆို၏။
ထိုဘာသာ ပြန်စာရွက်များကို ကျွန်ုပ်အားပေးကာ ပြင်ပေးပါဆိုလာ၏။
ပြင်ခိုင်းတယ်ဆိုတာ အကုန်ပြင်ခိုင်းတာမဟုတ်၊ စာလုံးအစိပ် အကျဲမညီတာ၊ bullet
point များ မညီတာကိုသာ ပြင်ပေးပါဆို၏။ အမှားတွေ အများကြီးပါနေတယ်။
ပြင်ပေးရမလား ဆိုတာတောင် နေပါစေ၊ ရပါတယ်ဆို၏။ ကိုယ့်ပစ္စည်းမဟုတ်တော့
အကျောက်အကန်ပြောလို့မကောင်း၊ ဒီအတိုင်း ထား လိုက်ရ၏။
ထုံးစံအတိုင်း စာကို အဖြတ်အတောက်မရှိ စာတစ်ပိုဒ်လုံးဆုံးသည်ထိ
တောက်လျှောက် ရေးထား ၏။ ထိုစာကို screen shot ရိုက်ပြချင်သော်လည်း
ကာယကံရှင်တွေ့လျှင် ပြဿနာအရှာခံရမည်မို့ မပြဝံ့။ ကျွန်တော် ဘယ်
လောက်ကြောက်တတ်မှန်း ဟိုတစ်နေ့ကမှ ပြောထားသေး၏။
ကီးဘုတ်ကိုကြည့်ကာ လက်ညှိုးတစ်ချောင်းတည်းနှင့် ဟိုရိုက် သည်ရိုက်
မရိုက်ပါနှင့်။ Office ကို ကျကျနန သုံးတတ်အောင်၊ tools တွေကို သုံးတတ်အောင်
လေ့လာစေလိုပါသည်။ (သူတို့က tools တွေ မသုံးတတ်တော့ ကျွန်တော့်မှာ
ကိုအေးငြိမ်းစာကိုဖတ်ပြီး မိုက်ခဲစိန်လည်း ခေါင်းကိုက်သွားပါတယ်။ သည်စာ သည်ဆောင်းပါးဟာ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်ကနေ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ပျောက်သွား လစ်သွားတာဟာလည်း ခေါင်းကိုက်ချင်စရာ ကောင်းပါတယ်။ သူက ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်ရေးကို စေတနာလေး ရှေ့ထားပြောတယ်။ စေတနာကို ဝေဒနာထင်သူတွေက ဘယ်လိုများ ပျောက်ကွယ်သွားအောင် လုပ်လိုက်ကြသလဲ မသိပါဘူး။ (မသိတဲ့အကြောင်းပဲ ရေးတာပါနော်)။
ကိုအေးငြိမ်းရဲ့ နိဂုံးကို မိုက်ခဲစိန်မှတ်မိသလောက် ရေးပြရရင်တော့ …
နောက်ပြီး စာကို ဖြစ်ကတတ်ဆန်းမရေးဘဲ
သေသေချာချာ ရေးကြပါ။ ဘာသာပြန်သည်ဆိုတိုင်း အရမ်းမပြန်ပါနှင့်။ မူရင်း
ဆိုလိုချက်ကို မိအောင် ပြန်ပါ။ ပိုက်ဆံယူလုပ်သည့် မည်သည့်အလုပ်ကိုမဆို
တန်အောင် ပြန်လုပ်ပေးပါ။ ပိုက်ဆံရ ပြီးရော။ ငါ့လက်ကလွတ် ဗြွတ်ဟု
မလုပ်ကြပါနှင့်ဟု စေတနာအပေါင်းနှင့် ကြေငြာမောင်းခတ်လိုက်ရပါကြောင်း။
၂၁ မတ်လ၊ ၂၀၁၈
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုအေးငြိမ်း ခင်ဗျား။ ခင်ဗျားရေးထားတာတွေက ကောင်းလွန်းတော့ သူများတွေ ဖျောက်ပစ် ဖယ်ရှားလိုက်တာတောင် မိုက်ခဲစိန်ခေါင်းထဲ သံမှိုစွဲသလို မပျောက်မပျက် ခေါင်းထဲစွဲနေတော့ ဆောင်းပါးကို အစအဆုံး ပြန်ကူးရေးစရာတောင် မလိုပဲ အခုလို ရေတသွင်သွင်စီးသလို ပြန်ပေါ်လာသလောက် ပြန်လည် ပြင်ဆင် ရေးသားလိုက်ပါတယ်။ အေးငြိမ်း၏ ပို့စ် ပျောက်ဆုံးမှု ရှာပုံတော်က သည်လောက်ပါပဲ။ သာဓု သာဓု သာဓု။
Tags: ကရင်, ချင်း, မိုက်ခဲစိန်, အေးငြိမ်း